Dooxada Stardew Valley 1.4 waxay la imaaneysaa astaamo badan oo cusub oo ku saabsan cusbooneysiin weyn | Androidsis
Dooxada Stardew waxaa loo cusbooneysiiyay 1.4 iyadoo leh waxyaabo badan oo cusub sanad gudihiis markii la sii daayay
Dooxada 'Stardew Valley' waa ciyaarta indie ee casriga ah si loo abuuro beertaada oo aad awoodo inaad saacado iyo saacado aad ku raaxeysato mid ka mid ah kulamada ugu fiican ee aan ku aragnay Android muddooyinkii ugu dambeeyay. Hadda Waxay leedahay nooca 1.4 oo yimid oo lagu rakibayo warar taasna waxay kaa dhigeysaa inaad la sinnaato kombuyuutarka iyo qalabka wax lagu xiro; inkasta oo wali aan lahayn ciyaartoy badan.
Kuwaas waxaa ka mid ah riwaayadaha cusub ka hadal in ka badan 60 maqaal cusub, in ka badan 24 nooc oo timo jare ah ama ulaha kalluumeysiga cusub ee ka mid ah liistada weyn ee aan hadda kuu sheegayno. Cayaar qaata qaybo badan oo maadooyin ah si aan usii wadno ku raaxeysiga farshaxankeeda pixel iyo inta aan rajeyneyno in maalin uun aan ka raaxeysan doonno ciyaartoy badan oo ka mid ah moobiilkeenna.
1 Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee nooca 1.4 ee Dooxada Stardew
2 Warkaas intaa ka badan ee cusbooneysiintan cusub qarinaya
Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee nooca 1.4 ee Dooxada Stardew
Waxaan horey u haysanay sanadkii hore si dib u eegistu ay ugu faraxsanaato dekedda weyn laga sameeyay PC. Weli waxaan haysannaa ciyaartoy badan, laakiin nooca 1.4 wuxuu ka dhigan yahay in heerka nuxurka aan kala siman nahay kombuyuutarka iyo qalabka wax lagu xiro, taas oo siinaysa qiimo weyn kuwa aan waligood tijaabin iyo kuwa ku xirmay taleefannadooda casriga ah.
La 1.4 laga bilaabo Dooxada Stardew Waa cusbooneysiin weyn oo waxaan ku soo koobi karnaa wararkan:
Dhamaadka ciyaarta waxaan heysanaa dhisme cusub oo lala xidhiidhi karo mustaqbalka oo la filayo multiplayer.
14 dhacdo oo cusub si loogu qanco saacadaha aad la raaxaysatid xaasaskaaga.
Waxyaabo badan oo ka socda 60 waxyaabaha cusub.
Balliyada ayaa lagu daray si ay u awoodaan inay wax ku abuuraan oo ku dhex kalluun karaan.
24 timo cusub, 181 funaanadood iyo koofiyado cusub, surwaal iyo kabo.
Hadda waxaa loo oggol yahay in lagu wareejiyo faylasha ciyaarta ee aan ku hayno kombuyuutarka moobiilka.
14 heeso cusub oo muusig ah si aad ugu noolaatid waqtiyadaada xiisaha leh.
Boqolaal cilad hagaajin ah.
Waxaan wajaheynaa wararkii ugu muhiimsanaa waana dhihi karnaa maxaa yeelay waxaa jira kuwa badan oo aan faallo ka bixin doono, inkasta oo aynaan faahfaahin doonin dhammaan faahfaahinta. Dooxada Stardew waa cinwaan in ku noolow ka kooban, iyo inkasta oo ay noo ogolaaneyso inaan u habeynno beerteenna mahadnaqdeeda udub dhexaadka ciyaarta, waxay u baahan tahay in la cusbooneysiiyo si loo helo maqaallo cusub oo bixiya aragtiyo kale oo ciyaarta ah.
Waxa ugu cajiibka badan oo aan shaki kujirin waa 60ka shey ee cusub waana inaan helno labadaba howlgalada iyo markaan soosaarayno. Waxaan ula jeedaa, waa maxay farsamada gacanta ayaa la dalacsiiyaa si aan u sii wadno abuurista walxo cusub oo aan ku siino beeraheena noocyo cusub oo wax soo saar ah.
Warkaas intaa ka badan ee cusbooneysiintan cusub qarinaya
Marka laga reebo inay awoodaan inay abuuraan kuwaas balliyada si ay uga kalluumaystaan laga bilaabo beerteenna, oo markaa naga badbaadi jidka loo maro wabiyada u dhow ama aadida dekedda badda, waxaan sidoo kale leenahay khariidad cusub oo la yiraahdo Cuatro Esquinas. Khariidadani waxay u heellan tahay ciyaartoy badan, sidaa darteed waxay aasaas u tahay si mustaqbalka aan si qayaxan ugu raaxeysanno ciyaarta aan jecel nahay.
Muuqaal kale oo ka mid ah 'Stardew Valley 1.4' ayaa ah booska ku yaal gurigeenna waa labanlaabmay taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan dhigno alaab guri oo badan. Dhinaca macdanta illaa laba, wuxuush cusub iyo laba heer oo beddelka macdanta ayaa lagu daray.
Dooxada Stardew waxay sidoo kale soo kordhisay waxyaabo badan oo kor u qaadis ah si ay khibradaha menu uga dhigto mid naaxin badan, anaguna xitaa u oggolow gelitaanka astaanta deggane kasta magaalada si loo ogaado xiriirka bulsho ee aan la leenahay; horeyba waad u ogayd in kani yahay ciyaar xoojineysa is dhexgalka bulshada.
Waa inaan ku xasuusinaa taas haddii aad leedahay ciyaar la keydiyay oo leh qaabkii hore 1.3, Uma qalanto isticmaalkeeda haddii aan cusboonaysiinno nooca 1.4. Marka waa wax xiiso leh inaad cusbooneysiiso ciyaartaas si aad ugu dambeyntii u dhoofiso ciyaarta nooca ugu dambeeyay.
A weyn Dooxada Stardew oo loo cusbooneysiiyay nooca 1.4 iyo inay sii waddo aasaas badan si ay u noqoto mid ka mid ah kulamada ugu wanaagsan ee maanta aan ku leenahay Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Dooxada Stardew waxaa loo cusbooneysiiyay 1.4 iyadoo leh waxyaabo badan oo cusub sanad gudihiis markii la sii daayay
Si xor ah ugu duuli dagaallada 4v4 ee ay bixiso Kick-Flight iyo gameplay-ga la qabatimay
Samsung iyo LG waxay qorsheynayaan inay soo saaraan kormeerayaal si aad ugu xirto mobilkaaga